नयाँ कोरोना त्रासः उडान प्रतिबन्धले लण्डनमैं अडकिए नेपाली - Everest Dainik - News from Nepal
नयाँ कोरोना त्रासः उडान प्रतिबन्धले लण्डनमैं अडकिए नेपाली
भरतपुरका डा. सुभाष रेग्मी बेलायतमा एकवर्षे अध्ययन सकेर क्रिसमसकै दिन डिसेम्बर २५ मा नेपाल फर्किने तयारीमा थिए। हवाई टिकट लिइसकेका डा। रेग्मीले सय पाउन्ड तिरेर पीसीआर परीक्षण पनि गराइसकेका थिए। तर, बेलायतबाट जानेलाई नेपालमा अचानक प्रतिबन्ध लगाइएपछि उनी बेलायतमै अलपत्र बनेका छन्।
यहाँको चेस्टर विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स इन अर्थोपेडिक्सको कोर्स पूरा गरेका हाडजोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ रेग्मीले भने, ‘नेपाल जान त पाइनँ नै, पीसीआर परीक्षणमा बुझाएको सय पाउन्डसमेत व्यर्थ भयो। टिकट पनि स्थगन भएपछि अहिले ओपनमा राखेको छु।’
बेलायतमा आफू बस्दै आएको घरको सम्झौता पनि यही डिसेम्बर अन्त्यमा सकिने उनले बताए। त्यसपछि कहाँ बस्ने भन्ने चिन्ताले उनलाई सताएको छ। ‘जनवरी १ पछि के गर्ने ? अझै अन्योलमा छु’, उनले भने।
आफूजस्तै अलपत्र परेका नेपालीका लागि नेपाल सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ। कोभिड—१९ परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ देखाउन सक्ने र नेपाल पुगेर अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार हुने नागरिकलाई देश प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘आवश्यक सतर्कता र सुरक्षासहित प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विकल्प खोजिनुपर्छ।’ उनले भने ।
लामो समयदेखि बेलायत बस्दै आएका पूर्वगोर्खा हीराधन राई पनि यात्रा प्रतिबन्धको चेपुवामा परेका छन्। नेपालमा आइतबार बुवाको निधन भएपछि राई अहिले काजकिरियाबाट वञ्चित बनेका छन्। ‘त्यसै त पिता गुमाउनुको पीडा छ, त्यसमाथि अन्तिम संस्कार र काजकिरियामा समेत सहभागी बन्न नपाउँदा मानसिक रूपमा झन् ठूलो आघात पर्दोरहेछ’, राईले भने।
रेग्मी र राईजस्तै हाल जारी यात्रा प्रतिबन्धका कारण जरुरी अवस्थामा पनि नेपाल जान नपाउने थुप्रै नेपाली छन्।
बेलायतको हडर्सफिल्ड विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत जनस्वास्थ्य विज्ञ डा। पदम सिम्खडाले बेलायतबाहेक अन्य मुुलुकमा पनि नयाँ भाइरस भेटिँदै गएकाले यात्रा प्रतिबन्ध कायम राखिराख्न सम्भव नहुने बताए।
ट्याग्स: New corona strain
६१ हजार ७६७ मतसहित काठमाडौं महानगरकाे मेयरमा बालेन साह निर्वाचित
राखेपमा गणेश थापाले बुझाए ज्ञापनपत्र
सहकारीको मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार चल्न नसक्दा सहकारीहरुमा समस्या उत्पन्न भएको छ : मन्त्री श्रेष्ठ